Dɛn na Yehowa Adansefo Yɛ Wɔ Wɔn Asafo Nhyiam Ahorow Ase?
Nea na tete Kristofo no yɛ wɔ wɔn nhyiam ahorow ase ara ne nnwonto, mpaebɔ, ne Kyerɛwnsɛm no a na wɔkenkan susuw ho—ná wɔnyɛ ɔsom mu amanne biara wɔ ase. (1 Korintofo 14:26) Sɛ woba yɛn nhyiam ahorow ase a, saa pɛpɛɛpɛ na wubehu sɛ yɛreyɛ.
Nkyerɛkyerɛ no gyina Bible so, na mfaso wɔ so. Asafo biara hyiam dapɛn awiei de simma 30 tie ɔkasa a egyina Bible so, na wɔkyerɛkyerɛ yɛn ma yehu sɛnea Kyerɛwnsɛm no fa yɛn asetena ne mmere a yɛte mu yi ho. Wɔhyɛ yɛn nyinaa nkuran sɛ yɛnhwɛ yɛn ankasa Bible mu nni ɔkasafo no akyi. Sɛ wɔma ɔkasa no wie a, yɛde dɔnhwerew biako yɛ “Ɔwɛn-Aban” Adesua, na wɔhyɛ atiefo no nkuran ma wɔma mmuae bere a yɛresusuw Ɔwɛn-Aban a adesua nsɛm wom no mu asɛm bi ho no. Saa adesua yi boa yɛn ma yɛde Bible akwankyerɛ yɛ adwuma wɔ yɛn asetena mu. Yesua asɛnkoro no ara wɔ yɛn asafo ahorow bɛboro 110,000 a ɛwɔ wiase nyinaa no mu biara mu.
Wɔboa yɛn ma yetumi kyerɛkyerɛ yiye. Yɛsan nso hyiam wɔ dapɛn no mu yɛ asafo nhyiam a ɛwɔ afã abiɛsa. Yɛato din Kristofo Abrabɔ ne Yɛn Asɛnka. Saa nhyiam yi, nsɛm a ɛwɔ Abrabɔ ne Asɛnka Adesua Nhoma a ɛba bosome biara no mu na yɛde yɛ. Ɔfã a edi kan ne Bible Mu Akorade, na ɛboa yɛn ma Bible no fã bi a asafo no mufo adi kan akenkan no, yenya mu asuade. Nea edi hɔ ne Ma W’ani Nku Asɛnka Ho, na yɛtaa hwɛ ɔyɛkyerɛ ahorow a yɛde sua nsɛm a yɛbɛka ne nkurɔfo abɔ Bible mu nkɔmmɔ. Saa ɔfã no, ɛyɛ a obi de afotu ma yɛn de boa yɛn ma yɛn akenkan ne yɛn nkyerɛkyerɛ tu mpɔn. (1 Timoteo 4:13) Adesua no fã a etwa to ne Kristofo Abrabɔ. Ɛno nso kyerɛ yɛn sɛnea yɛde Bible bɛbɔ yɛn bra. Ebi wɔ hɔ a, wɔyɛ no nsɛmmisa ma atiefo kyerɛ wɔn adwene, na ɛma yɛte Bible mu nsɛm ase paa.
Sɛ woba yɛn asafo nhyiam ahorow no bi a, akyinnye biara nni ho sɛ Bible nkyerɛkyerɛ a edi mũ a wubenya no bɛma w’ani agye.—Yesaia 54:13.
Sɛ wokɔ Yehowa Adansefo nhyiam ahorow ase a, dɛn na wobɛte wɔ hɔ?
Asafo nhyiam ahorow a yɛyɛ no dapɛn biara no mu nea ɛwɔ he na w’ani begye ho sɛ wobɛkɔ bi?
Di kan kenkan nneɛma a wobesusuw ho wɔ asafo nhyiam ahorow a edi hɔ no bi. Hyɛ nneɛma a wubetumi asua afi Bible mu a ebetumi aboa wo wɔ w’asetena mu da biara da no nsow.
Kenkan na hu sɛnea wɔayɛ nhyehyɛe a wɔnam so de akwankyerɛ ma asafo ahorow no.
Dɛn na Yehowa Adansefo Yɛ Wɔ Wɔn Nhyiam Ahorow Ase?